Boka duku iroro raive richibatanidza nevashandi vanobva mune mamwe maguta ari Bogotá, Lima, Santiago, Sucre, Córdoba, Sao Paulo uye zvishoma nezvishoma kambani yakasikwa, kwete pasina matambudziko, uye rwendo, zviitiko, kukurukurirana uyewo boka revatori vechikamu mukati maro base team izvo zvaizoita rwendo rwose. Gare gare, vanhu vakawanda, vagadziri vezvakatipoteredza, varwi vanoita zvematongerwo enyika nevasina simba vanobatana, pamwe chete nemasangano, masayunivhesiti, zvikoro, masunharaunda uye vanhu vanobva kunyika dzakasiyana, izvo, pamwe chete, zvakaitwa musi waMarch.
Kusvika kwake kwakazarura Foro and the Yunivhesiti Mazuva "Kuita Kuti Urege Kusvibiswa Uye Rugare" It akabata panguva dzinotevera mazuva 2, 14 15 uye 2017 September. It ndopakaperawo ane nesimba guru boka kuti akauya anenge aneta, kunyanya zvipingamupinyi tsika kuyambuka uye miganhu, pamwe zvisingaperi kudzokororwa kwemaBhaibheri ekare uye refu nokumirira nguva, izvo kazhinji kacho yakatanga vanonoka vasvike dzakarongwa zviito. Yakavimbiswa kuti dzimwe hurumende dziri munharaunda idzi dzinokonzera kusununguka kwevanhu vakasununguka.